“महोत्सव मार्फत शे-फोक्सुण्डोको सुन्दरता विश्वमाझ चिनाउँछौं” - imandarkhabar
“महोत्सव मार्फत शे-फोक्सुण्डोको सुन्दरता विश्वमाझ चिनाउँछौं”
संविधान जारी भएर संघीयतामा गएर स्थानीय सरकार आएको तीन वर्ष पुग्नै लागेको छ । चुनावताका जनप्रतिनिधिहरुले जनतालाई आश्वासनका पोका बाँडे तर जनतासामु गरेका बाँचा पूरा गर्न कति सफल भएका छन् त स्थानीय प्रतिनिधि ? के साच्चै नै सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुगेको छ त ? के गरिरहेका छन् विकट हिमाली जिल्लाका स्थानीय जनप्रतिनिधि ? कतै कर्मचारीलाई मात्रै दोष दिएर स्थानीय सरकार पन्छिन त खोजेको छैन ? पत्रकार रुपक कुलालले डोल्पाको पनि उपल्लो डोल्पा पर्ने शे फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी तुण्डुप गुरुङसँग गर्नु भएको कुराकानी ।
पर्यटकीय दृष्टिकोणले निकै महत्वपूर्ण र चर्चित शे फोक्सुण्डो तालको नामबाट नामाकंन गरिएको शे फोक्सुण्डो गाउँपालिकामा स्थानीय सरकार आइसकेपछि पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि के कस्ता काम गरिएको छ ?
हजुर धन्यवाद,तपाईले भनेजस्तो शे फोक्सुण्डो गाउँपालिका पर्यटकीय दृष्टिकोणले निकै महत्वपूर्ण गन्तव्यहो । किनकीहाम्रो गाउँपालिका शे फोक्सुण्डो ताल, राष्ट्रिय निकुञ्ज,जडिबुटी र प्राकृतिक सौन्दर्यले धनी छ । वर्षेनी हजारौं आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आउँछन् । पर्यटकहरुको रोजाइमा पहिले देखिनै फोक्सुण्डो पर्ने ग¥यो । विशेष त थिन्लेले बनाएको क्याराभान फिलिमपछि फोक्सुण्डोको विश्वमाझ अझ बढी परिचित हुन पुग्यो । अहिले पर्यटकहरु विश्वभरबाट फोक्सुण्डो तालको सुन्दरतालाई हेर्न आउँछन । अब तपाईले भने जस्तो फोक्सुण्डोको पर्यटन विकासका लागि स्थानीय सरकार आइसकेपछि पूर्वाधार विकासमा जोड दिएका छौँ । तालको सुन्दरता कायम राख्ने काम पनि भएका छन् ।
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० चलिरहेको छ । तपाईको क्षेत्रको प्रचार प्रसार र भ्रमण वर्षलाइ सफल बनाउन के गर्दैछ फोक्सुण्डो गाउँपालिका ?
फोक्सुण्डो ताल र राष्ट्रिय निकुञ्जको पर्यटन विकासमा केन्द्र र प्रदेश सरकारको पनि उत्तिकै चासो छ । संघ र प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका पर्यटकीय गन्तव्यमा पनि फोक्सुण्डो परेको छ । विशेष गरी हामीले भ्रमण वर्ष सफल बनाउन र फोक्सुण्डोको प्रचार प्रसारका लागि आगामी भदौं २६ देखि ३० गतेसम्म शे फोक्सुण्डो महोत्सवको आयोजना गर्दैछौँ । महोत्सवमार्फत फोक्सुण्डोको सुन्दरता विश्वमाझ चिनाउँछौं ।
विकट हिमाली जिल्लाको पनि उपल्लो डोल्पा जस्तो विकट गाउँपालिकाको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ । के छन् चुनौतीहरु,चुनावी बाचा पूरा गर्न सहज छन् त ?
तपाईले निकै गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो,विकटका स्थानीय तहहरुलाईकाम गर्न आफैमा धेरै चुनौती छन । त्यसमाथि चुनावी बाचा पूरा गर्न त्यति सहज त पक्कै छैन । मुख्यत कर्मचारीको कारण कामहरु गर्न निकै कठिन छ । कर्मचारीको रोजाइमा सुगम जिल्ला पर्ने भएकाले पनि हाम्रो गाउँपालिकामा भौगोलिक विकटताका कारण काम गर्न निकै चुनौती छ । त्यसका बावजुद पनि हामीले शिक्षा,स्वास्थ्य,सडक,पर्यटन र सञ्चारका क्षेत्रमा भने केही कामहरु गरेका छौँ । चुनावमा गरेका बाचा अनुसार केही पूरा भएका छन् । बाँकी कामहरु गर्न पनि हामी निरन्तर लागि परेका छौं ।
विकासका कुरा गर्दा सडक नै पहिलो प्राथमिकतामा आउँछ । तपाईको गाउँपालिकासम्म सडक सञ्जाल जोडिएको छ, छैन ? के छ अवस्था ?
सडकको कुरा गर्दा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने एउटै आधार भनेको भेरी करिडोर हो । करिडोर अन्तर्गत डोल्पा सदरमुकामसम्म सडक सञ्जाल पुगिसकेको छ । त्यस्तै चीनको सिमानाबाट मरिम नाकासम्मको कुल १ सय १० किलोमिटरमध्ये नेपालतर्फ ६० किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको छ । दुनैदेखि धोसम्मको ५० किलोमिटर सडक बन्न बाँकी छ । भेरी करिडोरले हाम्रो छिमेकीगाउँपालिका डोल्पोबुद्धलाई पनि छुन्छ । त्यहाँबाट ३५ किलोमिटर जतिको सडक खनेर राष्ट्रिय सडक सञ्जाल जोड्ने तयारीमा छौँ । दुनैदेखि धो सम्मको सडक निर्माण भए सबैभन्दा छोटो त्रिदेशीय मार्ग भेरी करिडोर नै हो । तर हामीलाइ चिनियाँ नाकाबाट सडक जोड्न सहज छ । क्याटो नाकाबाट नेपालतर्फ ६ किलोमिटर सडक निर्माण भैसकेको छ । सडक विस्तारका लागि गाउँपालिका आफैले डोजर किनेर आन्तरिक सडक विस्तार गरिरहेका छौँ । धेरैजसो वडामा बाटो खन्ने काम सम्पन्न भएको छ । केही वडामा सडक खन्न निकै कठिन भएपनि काम निरन्तर भइरहेको छ ।
तपाईको गाउँपालिकामा सञ्चारको अवस्था कस्तो छ । सबै जनताहरु सञ्चारको पहुँचमा छन् त ? विद्युतको अवस्था के छ ?
सञ्चारको कुरा गर्दा पहिले त कुनै इन्टरनेट र नेटवर्क थिएन । तर हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि नेपाल टेलिकमको सहयोगमा पहिले फोक्सुण्डोमा,त्यसपछि सालदाङमा र अब भिजेरमा राख्ने प्रयास भइरहेको छ । तर सबै ठाउँमा सञ्चारको पहुँच पुगेको छैन । किनकी भिसालिँक भएकोले ३२ जना भन्दा बढिले कुरा गर्न मिल्ने अवस्था छैन । टेलिकमले थ्री जी नेटवर्क पु¥याउने आश्वासन दिएको छ हेरौँ कहिले पु¥याउँछ । इन्टरनेटको पहुँच अहिलेसम्म पुग्न सकेको छैन । हामीले पहल भने गरिरहेका छौं । आउँदो आर्थिक वर्षमा इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । विद्युतको कुरा गर्दा कुनै हाइड्रो पावर छैनन् सोलार सिस्टमबाटै सबै काम कारबाही सञ्चालन भइरहेका छन् ।
गाउँपालिका भित्र शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था के छ ? जनताले आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा लिन पाएका छन् त ?
हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै स्वास्थ्य क्षेत्र देखा परेको छ । उच्च हिमाली भेग भएकाले स्रोत साधनको कमी छ । आवश्यक जनशक्ति छैन । कर्मचारीहरु बस्नै मान्दैनन् । त्यसैले जनताले चाहे अनुसारको स्थास्थ्य सेवा हामीले चाहेर पनि पु¥याउन सकेका छैनौं । आम्चीको भरमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन भइरहेको छ ।
शिक्षाको कुरा गर्दा गाउँपालिका भित्र ९ ओटा सरकारी विद्यालय छन् तर दक्ष जनशक्तिको अभाव जहिल्यै झेल्नु परेको छ । नेपाल सरकारको पहुँच नै पुग्दैन विदेशी दाताहरुको सहयोगमा जसो तसो सञ्चालन भइरहेको छ । दरबन्दीका शिक्षक पनि जानै मान्दैनन् । पहिला भन्दा शिक्षा क्षेत्रमाकेही सुधार भएपनि यो पर्याप्त छैन ।
भौगोलिक विकटता र मौसमी प्रतिकुलता हिमाली भेगमा उच्च हुन्छ कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा के–के सुधारका प्रयासहरु भएका छन् ?
वास्तवमा भन्नुपर्दा हिमाली जिल्लाको जनजीवन पहिले देखि नै कृषि र पशुपालनको भरमा नै हो । स्थानीय उत्पादनलाई चीनमा लगेर नुनसँग साट्ने गरिन्छ र तल्लो डोल्पामा पनि नुनसँग अन्य अन्न साटेर गुजारा चलिरहेको छ । पशुपालनमा मुख्य त चौरी नै हो । यार्सागुम्वा टिपेर बेच्न थालिएपछि केही हदमात्यहाँको जीवनस्तर सुधार गर्न सहयोग गरेको छ ।
पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको तपाईको गाउँपालिका,विश्वकै आकर्षणको केन्द्र पनि हो । पर्यटन क्षेत्रबाट स्थानीयको जीवनस्तर उकास्न केही टेवा पुगेको छ ?
तपाईले भने जस्तै फोक्सुण्डो आफैँमा प्रचुर पर्यटकीय सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । तर जहाँसम्म स्थानीय लाभान्वित हुने कुरा छ । वास्तवमा विदेशी पर्यटक आइरहेका छन् । तर त्यसको फाइदा स्थानीयले लिन सकेका छैनन् । किनभने पर्यटकको सबै ट्याक्स केन्द्र सरकारले काट्छ । घुम्न आउने पर्यटकलाई ट्राभल एजेन्सीहरुले काठमाडौंबाटै खाने बस्ने ब्यवस्था गरेर पठाउँछन् । त्यसैले स्थानीयलाई फाइदा छैन भन्दा पनि हुन्छ । यस्ता कुरालाईमध्यनजर गर्दै अहिले गाउँपालिकाले ठाउँ–ठाउँमा होमस्टे सञ्चालनमा ल्याउँदै छ । त्यसो गर्दा ट्राभल एजेन्सीहरुले सामान लिनु पर्ने वातावरणको अन्त्य गर्ने र स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नेबारेमा हामी विश्वस्त छौं ।
स्थानीय सरकार आएपछि जनतामा खुशियाली थियो तर पछिल्लो समय बढ्दो भ्रष्टाचारले जनतामा निराशा छ । तपाईको गाउँपालिकामा के छ भ्रष्टाचारको अवस्था ? विकास निर्माणका काममा भ्रष्टाचार भएका छन् कि छैनन् त ?
भ्रष्टाचारको समालमा हाम्रो गाउँपालिकाले शुन्य सहनशिलता अपनाएको छ । भष्ट्राचार अहिलेसम्म कसैले गरेको छैन, गर्न पनि हामी दिदैनौँ । यतिनै भन्न चाहान्छु ।
Previous articleभारतमा विमान दुर्घटना, पाइलटसहित १७ जनाको ज्यान गयो
Next articleडोल्पो महोत्सव डोल्पाको पर्यटन विकासमा कोशेढुङ्गा सावित भएको छःपेमा छेबाङ भोटे